प्रेक्षालयमा प्याजी ‘झ्यालिन्चा’ – मुलधार न्युज
Home > Front News > प्रेक्षालयमा प्याजी ‘झ्यालिन्चा’
२८ कार्तिक २०७४, मंगलवार १७:२०
केही दिनदेखि प्रत्येक सूर्यास्तको बेला पानी पर्न थालेको थियो । कहिले सिमसिम । सिमसिम । कहिले रिमझिम । रिमझिम ।’ कात्तिकको अन्तिमतिर नाटकघरमा हरेक दिन ‘मंसिर’ महिना र ‘सिल्भर क्लाउड्स’ को चर्चा भइरहेको छ । मंसिरको पूर्वसन्ध्यामा नाट्यघरमा साधनारत नाट्यशिल्पीहरू मंसिरकै सेटिङबारे चर्चा गर्छन् ।
मंसिरमा हरेक दिन साँझपख पानी दर्कन्छ र सूर्यास्तको छेको पारी काठमान्डुमा करिब पौने घन्टा बर्सात् हुन्छ । ‘ठन्डी महिनासित सिल्भर क्लाउड्सको कस्तो खालको दुस्मनी थियो यसै केही भन्न सकिन्नथियो’, न्यारेटर भन्छ, ‘सहरका प्रमुख आर्ट-अड्डाहरूमा एकसरो इन्द्रेणी सर्लक्क झुल्किन्थ्यो । नाट्यगृह, कला संग्रहालय तथा संगीत आ श्रमका मूलगेटमा सजिएका मिनियचर-इन्द्रेणी स्वागतद्वारझैं लाग्थे, जसलाई कला पारखीहरू आफ्नै घाँटीमा झुन्डिएको वरमालाझैं ठान्थे ।’
काठमान्डुबाट झ्यालिन्चा लोप भइसक्न लागे पनि राजधानीको प्रेक्षालयमा एक घन्टासम्म ‘झ्यालिन्चा’ उडिरहन्छ । एउटा इन्द्रेणी साँझ ‘झ्यालिन्चा’ उपन्यासको रचनाबारे बोल्न किताबका लेखक हासबिरा (हामी सबैका बिलभ्ड राइटर) स्टेजमा उपस्थित छन् । नाटक हेरिरहेका दर्शकलाई के अनुभूत हुन्छ, भने उनीहरू लेखकको सम्बोधन- श्रवण गर्न त्यसरी उत्साहका साथ मण्डला थिएटरमा भेला भएका छन् । मौसमको चर्चा र कथाअनुसार, नाटक हेरिरहेका दर्शकले बर्सादी ओढेर हासबिराको प्रवचन सुनिरहेका छन् । र, दर्शकले शरीरबाट बर्सादी नखोलीकनै आसनग्रहण गरेका छन् ।
हासबिराको नयाँ उपन्यास ‘झ्यालिन्चा’ सहरका किताब-पसलमा भर्खरैमात्र आइपुगेको छ । हासबिरा भन्छन्, ‘तर, उपन्यास पढिहाल्ने तपाईंको तात्कालिक मूड भने कतै घुम्न गएको थियो । तसर्थ उक्त भर्जिन किताब तपाईंको सिरानीछेवैको कफी टेबलमा प्रियसीको फ्रेस डेडबडीझैं लम्पसार ढलेको थियो ।…सग्लो किताब सङ्लो मनले पढ्नुपर्छ । तपाईं यस्तै ठान्नुहुन्थ्यो ।’
कुनै पनि कुर्सी खाली नरहेको प्रवचन-कक्षमा हासबिरा सिग्रेट सल्काएर एस्ट्रेमा धुलो खसाल्दै कालो ड्रेसमा ‘झ्यालिन्चा’ रचनाबारे लामो प्रवचन दिन्छन् । लगत्तै चुरोटलाई एस्ट्रेमा किचिमिची पार्छन् । कसैलाई पनि औपचारिक अभिवादन नगरी उनी एकनासले, आफ्नै अन्दाजमा बोल्न थाल्छन् । मानौं, उनी अभिनय होइन, मात्र व्याख्या गरिरहेका छन् । उनको आवाजमा नमीठो बिरानोपन हुन्छ ।
उनी किताब लेखनताका कस्तोखाले मनोदशाबाट गुज्रिएका थिए ? किताब लेखिरहेका बखत कस्ताकस्ता घटना उनले देखिरहेका थिए ? कथावाचनको प्लट उनको मस्तिष्कभित्र कसरी जन्मियो र उनको मानसिक अवस्था कस्तो रह्यो भन्नेबारे हासबिराले प्रवचन दिइरहेका छन् । उनको किताब-रचनामाथिको प्रवचन नै नाटकको मूल-कन्टेन्ट हो ।
हासबिरा बेलाबेला सुस्केरा हाल्छन्, उत्तेजित हुन्छन्, केही सम्झेझैं गर्छन्, दुःखी बन्छन्, चर्को आवाजमा हा“स्छन्, कुनैबेला निन्याउरो बन्छन् र कुनैबेला मौन भएर ध्यान-मुद्रामा बस्छन् । अन्त्यमा नाटकले राजनीतिक मोड लिन्छ । नाटक सकिएपछि ‘जनयुद्ध’का बेला मानिसले भोगेका दुःख, उनीहरूका विभिन्न मुद्रा, उनीहरूका आश्चर्य पढ्न सकिन्छ- प्रेक्षालयमा । लाग्छ, नाटकले तीव्र रूपले विभिन्न बिम्बहरूको खोजी गरेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्को शनिबारीय परिशिष्टांक ‘फुर्सद’मा प्रकाशित कुमार नगरकोटीको कथा ‘झ्यालिन्चा’मा आधारित नाटकलाई दयाहाङ राईले निर्देशन गरेका हुन् । कात्तिक २१ देखि मण्डला थिएटरमा मञ्चन भइरहेको नाटकले कुनै दुर्गमकी ग्राम-बाला कसरी लालसेना र नेपाल सेनाको दोहोरो चेपुवामा परिन् र उनको इहलीला समाप्त भयो भन्ने कथा भन्छ । कथावाचन शैलीमा मञ्चन भएको नाटकमा ‘झ्यालिन्चा’का लेखक हासबिरा जीवन्त-भावमा सरकारी सेनाको बलात्कारबाट मृत्यु भएकी युवती (जो बेपत्ताको राष्ट्रिय—सूचीमा पनि छैन) को ‘मृत-आत्मा’ कसरी ‘झ्यालिन्चा’ बनेर सहरभरि उडिरहेको छ भन्नेबारे व्याख्या गर्छन् ।
‘झ्यालिन्चा’ भन्छे, ‘चञ्चल केटी थिएँ । हेर्दाहेर्दै मञ्चल युवती भएँ । फ्रक लगाएर डुलिहिँड्थेँ, फर्‍याकफुरुक गर्थें । तर बैंसले गुन्यू, चोलो मागेपछि जवान भएँ । र, यहीबेला देशमा युद्ध सुरु भयो । साथी-संगिनीहरू बन्दुक बोकी जंगल पसे । चक र डस्टर बोकी मचाहिँ पाठशाला पसेँ ।’
‘जनयुद्ध’मा लालसेनाहरूलाई भात खुवाएको आरोपमा ‘झ्यालिन्चा’लाई सरकारी सेनाले ‘अपराधी’ भन्दै अपहरण गर्छ । तर, झ्यालिन्चाकी आमालाई विश्वास छ- उनकी छोरी झ्यालिन्चा बनी उडेर कतै सुदूरमा पुगेकी छे र एकदिन पक्कै फर्केर आउने छे ।
झ्यालिन्चा भन्छे, ‘युद्धले मजस्ता कति झ्यालिन्चाहरू नष्ट गर्‍यो, मलाई थाहा छैन । म त माटोमुनि गाडिएकी छु । पुरिएकी छु । र, ऐँसेलुको झ्याङमा मेरो हंश अल्झिएको छ । त्यही झ्याङ्छेवै कसैले खनेर, खोतलेर हेरेको खण्डमा मेरो नलीहाड, खप्पर र कंकाल अझै भेटिइने छ ।’
उपन्यासको अन्त्यतिर आफ्नै बगैंचामा हासबिराले पालेको छेपारोले प्याजी झ्यालिन्चालाई खाइदिन्छ । लेखक हासबिराले त्यस छेपारो ठमेलको कुनै व्यस्त ट्याटु हाउसबाट किनेर ल्याएका थिए । र, हासबिरा भन्छन्, ‘बगैंचामा छेपारो पाल्नु मेरो सोख हो ।’ छेपारोले आफूलाई उहिल्यै खाइसकेको बताउँदा ‘झ्यालिन्चा’को आत्मा उडेर कतै पुगिसकेको हुन्छ ।
लभभग ५० मिनेटको नाटकमा विजय बराल (हासबिरा) र रञ्जना ओली (झ्यालिन्चा)ले अभिनय गरेका छन् । नाटकमा अनुपम शर्माले प्रत्यक्ष संगीत दिएका छन् । किरण चाम्लिङले गीत संयोजन गरेका छन् । नाटकको मञ्च निर्माण र प्रकाश व्यवस्थापन भने रोहित पौडेल र अनुप न्यौपानेले गरेका छन् ।
‘छक्का पञ्जा–२’ र ‘मेरो पैसा खोइ’ एकसाथ बजारमा
तिब्बतीलाई नागरिकता दिन सिफारिस गर्ने वडाध्यक्ष पक्राउ
इलाम कारागारमा १५७ कैदी बिरामी
पहिलो पटक प्रहरी पुग्दा गाउँबासी डराएर लुके
चोरीको मोबाइलसहित चार जना पक्राउ
सिक्री खोसेर भाग्ने गिरोह प्रहरीको फन्दामा
अपडेटःमहेन्द्रनगरमा गोली लागि मृत्यु भएकाको पहिचान खुल्यो
एनआरएनका मध्यपूर्व संयोजक पक्राउ
गाउँपालिका तोडफोडको आरोपमा अध्यक्षसहित केही व्‍यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा
लागुऔषध सेवन गरी होहल्ला गर्ने पाँच पक्राउ
चितुवाको छालासहित चारजना जमलबाट पक्राउ